Phupha nge cape Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Ingubo eluhlobo olungenamikhono. Ilaphu eliwayo kakhulu lisongela umzimba ongaphezulu kwaye ngamanye amaxesha lide liye kumaqatheni. Kukho iingubo ezinekhola okanye ihood. Ingubo ibotshelelwe entanyeni ngentambo, iqhosha okanye iqokobhe.
Abalawuli babedla ngokunxiba iingubo ezibiza kakhulu, ke ikapa ende ihlala inento entle kuyo. Nangona kunjalo, ikwaluphawu loosiyazi kunye noosiyazi, njengoHarry Potter, kwaye ke oko kunokubonakala ngathi kuyothusa okanye kuyimfihlakalo. Namhlanje siyayazi njengengubo yefashoni ngohlobo lwee-capes okanye iiponchos.
Iphupha malunga nekapa linokuvuselela umdla. Umphuphi angathanda ukwazi ukuba ngubani ofihle phantsi kwakhe. Okanye mhlawumbi isongelwe kwilaphu. Ukutolikwa kwamaphupha alo mfuziselo, umxholo ubalulekile njengonxibelelwano kuwo.
1 Uphawu lwephupha «ikapa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikapa» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ingubo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikapa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ikapa isetyenziselwa ukugubungela umzimba ukukhusela kwingqele nakumswakama, kodwa nakukujonga okungafunekiyo. Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha ikakhulu luphawu lwe Ububi.
Ukuphupha, kuphakama umbuzo wokuba le nto kufuneka ifihlwe njani. Mhlawumbi ukuphupha uzama kwimeko ethile ukufihla iinjongo zakho zokwenyani. Kwimeko yobungcali okanye yeshishini, ngamanye amaxesha kuyacaca ukuba ungazivezi iingcinga zakho kunye nezicwangciso kusekutsha.
Nangona kunjalo, umaleko ephupheni unokuba nawo nakwenye intsingiselo yephupha. Ikhava zimele. Ngokunokwenzeka umphuphi akaziphathanga kakuhle kwaye kamva angathanda ukufihla isenzo sakhe. Kwakhona, kuxhomekeke kutoliko lwamaphupha, uphawu lwephupha lunokubandakanya iimvakalelo ezifihliweyo.
Enye into yolu phawu luphupha kukukhusela kunye nokushushubeza kweKapa, ​​ngakumbi ukuba yenziwe ngoboya okanye imink. Ngokwenkcazo yephupha, ukusonga umzimba kubonisa ukhuseleko lomzimba kunye nokhuseleko lweemvakalelo.
Ukongeza, isimboli yentlalo yale ngubo ibaluleke kakhulu. Inika isidima kunye nalowo uyinxibayo ephupheni Jonga kwi. Unokuziva uphupha uhlonitshwa ngabanye, kodwa unokufuna ukuzihlonipha ngakumbi.
Ukutolikwa okuxhaphakileyo kwamaphupha, ukubeka ingubo kuthathwa njengowazisa ngamathuba athembisayo. Nangona kunjalo, ukuba ulahlekile ephupheni, uphawu lwephupha lumkisa ngezinto kunye nelahleko efanelekileyo.
Uphawu lwephupha «ikapa» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwamaphupha, uphawu lwephupha "umaleko" lumele i-psyche engalinganiyo. Uyahamba iindawo ezimnyama zobukho uphazamisekile, ukuba lowo uphuphayo engazi ufuna ukuzifihla kwabanye okanye kuye. Ephupheni, umnqweno osinyanzelo uyabonakala ukufihla kunye nokucinezela iimpawu ezithile zobuntu.
Ngokukodwa xa ikapa imfutshane kakhulu, uphawu lwephupha lubonisa uloyiko lokufunyanwa kunye nokuvezwa. Ukongeza, ngokutolikwa kwephupha, ilaphu eliqaqambileyo ikwangumboniso weemvakalelo ngakumbi. Ukungaphumeleli. Umphuphi akafuni ukuvuma esidlangalaleni iimvakalelo zakhe, mhlawumbi uthando olufihlakeleyo emntwini, kwaye azinxibe phambi kwabanye.
Enye into ekuchazeni uphawu lwephupha yimfuno yokukhuselwa komntu okanye owasemzini. Kuzo zombini iimeko, umaleko kufuneka ubonise ukhuseleko kunye nokulala.
Uphawu lwephupha «ingubo» - ukutolika kokomoya
Ingubo luphawu lokhuselo lokomoya kwimilingo egqithileyo. Isimboli yephupha yalatha kuyo ukhuseleko ngokholo.
Ukuphulukana nengubo kufanekisela ukutolikwa kwephupha lokomoya uloyiko lokuphupha ukuba ukholo lwakho lunokuba semngciphekweni.